စပိန်တွင်လူ ဦး ရေအများဆုံးမြို့ ၁၅ မြို့ - UniProyecta
သင်စပိန်ယဉ်ကျေးမှုကို ၀ ါသနာပါပြီးခရီးသွားလုပ်ငန်းအနည်းငယ်လုပ်ရန်နာမည်ကျော်မြို့တစ်မြို့ကိုရှာဖွေနေပါက၎င်းတို့သည်အဘယ်အရာဖြစ်သည်ကိုသိရန်ကျွန်ုပ်အားနောက်သို့လိုက်ပါ။ လူ ဦး ရေအများဆုံးမြို့ ၁၅ မြို့ ဒီလှပတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့
ဒီမှာမင်းကသူတို့ရဲ့ရင်ပြင်နဲ့လမ်းတွေကိုဖြတ်သွားမလားကြည့်ဖို့လူ ဦး ရေအများဆုံးမြို့ဆယ်ငါးမြို့စာရင်းကိုငါပြမယ်။ ဒါ့အပြင်ငါမင်းကိုအကြံဥာဏ်တစ်ခုပေးလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သုံးသပ်ချက်အတိုတစ်ခုထပ်ထည့်တယ် မြို့တစ်မြို့ချင်းစီ၏ထူးခြားချက်များမရ။ ဤနည်းအားဖြင့်ငါစပိန်နှင့်အတူလူ ဦး ရေအများဆုံးမြို့ကြီးများကိုသိရှိရန်မဟာစွန့်စားခန်းတွင်မင်းနှင့်အတူလိုက်ပါခဲ့သည်။
1 စပိန်နိုင်ငံတွင်လူ ဦး ရေအများဆုံးမြို့များစာရင်း
1.9 လာ့စ်ဗီး Palma
စပိန်နိုင်ငံတွင်လူ ဦး ရေအများဆုံးမြို့များစာရင်း
တွက်ချက်မှုသည်မက်ဒရစ်မှစတင်သည်၊ သူမမကြားဖူးသောသူများ လှပသောပြည်နယ်သည်တိုက်ကြီး ၅ တိုက်တွင်လူသိများပြီး၎င်း၏နေထိုင်သူများနှင့်ဧည့်သည်များ၏မျက်နှာများကိုသတိပြုမိသည်။
လူ ဦး ရေ ၃၂၀၀၀၀ ကျော်နေထိုင်သည်သာယာသောသမိုင်းနှင့်ခေတ်ပြိုင်နေရာများလည်ပတ်ရန်ကြီးကျယ်ခမ်းနားသောမြို့တော်များသို့အသက်ပေးပါ၊ သာယာ ၀ မ်းသာသောရင်ပြင်များ၊ ပန်းခြံများနှင့်ပြတိုက်များပါ ၀ င်သည်။
Gran Via မှ
Reina Sofia ပြတိုက်
El Capricho ပန်းခြံ
ဘာစီလိုနာကဒုတိယနေရာမှာရပ်တည်နေပါတယ်။ လူ ဦး ရေ ၁,၆၀၀,၀၀၀ ကျော်နေထိုင်သောမြို့ဖြစ်သည် ဤခံ့ညားသောမြို့၏ကွဲပြားခြားနားသောနေရာများကိုရွှင်လန်းမှုနှင့်ပြည့်စေသည်။ ၎င်းသည်ခေတ်ပြိုင်အတိတ်ကိုမြို့ပြအင်ဂျင်နီယာခေတ်ရေစီးကြောင်းသစ်များနှင့်ပေါင်းစပ်ပုံကိုသိသောလက်ရာမြောက်သောဗိသုကာလက်ရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ လည်ပတ်ရန်နေရာများသည်
Sagrada Familia ဘုရားရှိခိုးကျောင်း
Metropolitan Basilica ဘုရားရှိခိုးကျောင်း
Santa Maria del Mar ၏ Basilica
Casa Milá - La Pedrara
Camp Nou ။
Valencia သည်လူ ဦး ရေ ၇၉၀၀၀၀ ထက်ပိုမိုများပြားသောစပိန်ရှိလူ ဦး ရေအများဆုံးမြို့များ၏တတိယနေရာတွင်ရှိသည်၎င်းသည်နည်းသည်မဟုတ်။ ဒီမြို့ကိုလည်ပတ်တဲ့အခါမင်းရဲ့အားလပ်ရက်တွေမှာမနှောင့်နှေးဘဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေချင်မယ့်အရသာအားလုံးနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့သာယာလှပတဲ့နေရာတွေကိုမင်းနှစ်သက်လိမ့်မယ်။ သဘာဝရှုခင်းများမှရှေးရာစုနှစ်များစွာ၏အနုပညာလက်ရာများနှင့်အခြားအရာများသည် ပို၍ နာကြည်းဖွယ်ကောင်းသည်။ လာ၍ လည်ပတ်ပါ။
ဘုရားရှိခိုးကျောင်းနှင့် Plaza de la Virgen
Sistine Valencian Chapel
Marquis of Dos Aguas နန်းတော်
Barrio del Carmen ၏နန်းတော်များ
၎င်းတွင်လူ ဦး ရေ ၇၀၀,၀၀၀ ခန့်ရှိသည်။ Seville သည်စပိန်တွင်လူ ဦး ရေအများဆုံးရှိသောမြို့များအနက်စတုတ္ထအဆင့်တွင်ရှိသည်မရ။ ဒီမြို့ကိုဘာကဆွဲဆောင်မှုရှိစေတာလဲ။ ၎င်း၏လမ်းများ၊ ရာသီဥတု၊ အစားအစာချက်ပြုတ်နည်းနှင့်အံ့သြဖွယ်အနုပညာလက်ရာများကိုအဝေးကြီးမှသင်စဉ်းစားနိုင်သေးသည်။ သူတို့ကအဖြစ်:
Seville ဘုရားရှိခိုးကျောင်းနှင့် La Giralda
Seville ၏ရီးရဲလ် Alcazar ။
Santa Cruz မြို့ရိုးများ
မာရီယာ Luisa ပန်းခြံ
ဖြစ်လာဖို့ဇာရာဂိုဇာအကြောင်းဘာထူးခြားလဲ စပိန်တွင်ပဉ္စမမြောက်လူ ဦး ရေအများဆုံးမြို့? ဤလူ ဦး ရေများပြားသောပျော်ရွှင်သောနေထိုင်သူများထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်လာရန်ဤလက်ရာမြောက်သောမြို့သို့သင်သွားလည်သင့်သည် လူ ဦး ရေ ၆၉၀,၀၀၀ ခန့်ရှိသည်မရ။ ဤမြို့သည်၎င်းတို့အားသမိုင်း၏ပြည့်နှက်နေသည့်အတိတ်တစ်ခုတွင်သင်ထောင်ချောက်ဆင်စေမည့်အထင်ကြီးလေးစားဖွယ်ကောင်းသော၎င်း၏ဗိသုကာလက်ရာများနှင့်၎င်းတို့ကိုသင့်အားခေါ်ဆောင်လာသည်။
Pilar of Our Lady of Pilar ။
ဘုရားရှိခိုးကျောင်း Seo del Salvador
San Pablo ဘုရားကျောင်း
Santa Engracia ဘုရားကျောင်း
Palacio ရီးရဲလ် Maestranza de Caballería
ဟို Antonio Labordeta Grande Park
La Lonja အဆောက်အအုံ
လှပသောတောင်များ၊ ကျယ်ပြန့်သောကမ်းခြေများ၊ နေရောင်ခြည်နှင့်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောရာသီဥတုတို့ဖြင့်ဝန်းရံထားသော Costa del Sol ၏မြို့တော် Malaga သည်ဤထူးခြားချက်များကိုသက်ရှိထင်ရှားရှိနှင့်သက်မဲ့ထင်ရှားသောခရီးသွားနေရာများနှင့်အတူဤပြည်နယ်ကိုဖြစ်စေသည်။ ဆဌမမြောက်စပိန်လူ ဦး ရေအများဆုံးမြို့ဖြစ်သည် ခုထိ ထက်ပိုပြီး 560.000 နေထိုင်သူသင်သွားလိုသည့်အခါတိုင်းသင်လည်ပတ်နိုင်သောအောက်ပါနေရာများနှင့်ထင်ရှားသည်။
Malaga မှ Alcazaba
Marqués de Larios လမ်း။
Pier One ။
Pedro Luis Alonso ဥယျာဉ်
တစ်ဦးနှင့်အတူ လူ ဦး ရေ ၄၄၀,၀၀၀ ရှိသည်Murcia ကိုစပိန်မှာသတ္တမမြောက်လူ ဦး ရေအများဆုံးမြို့ဖြစ်လာအောင်လုပ်ပါ။ ၎င်းသည်စိုက်ပျိုးရန်ကြီးမားသောမြေများပါ ၀ င်ပြီး၎င်းသည်ဒေသခံများအားဆွဲဆောင်ရန်ပြည်နယ်ကိုအလှဆင်ထားသောကြီးမားသောအဆောက်အအုံများနှင့်အတူပါ ၀ င်သည်။ သင်သွားလည်ရန် (သို့) တည်းခိုရန်ဆုံးဖြတ်ပါကသင့်အားစောင့်ဆိုင်းနေသောဤနေရာများကိုသတိပြုပါ။
Santa Maria ဘုရားရှိခိုးကျောင်း
Santo Domingo ရင်ပြင်
Plaza de las Flores ။
သင်ပင်လယ်ကမ်းခြေကို ၀ န်းရံလိုလျှင်၊ ကမ်းခြေလေညင်းများနှင့်ပူနွေးသောနေရောင်တို့နှင့်ပြည့်နေလျှင် Mallorca သည်ခရီးဆုံးဖြစ်သည်။ ဤမြို့သည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်လူ ဦး ရေ ၄၀၇၀၀၀ ရှိပြီးစပိန်တွင်အကြီးဆုံးလူ ဦး ရေအဋ္ဌမမြို့ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မြေထဲပင်လယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုစိတ် ၀ င်စားသော၎င်း၏ဧည့်သည်များကိုကြိုဆိုသောရှေးဟောင်းနှင့် avant-garde ယဉ်ကျေးမှုတို့နှင့်ပြည့်နှက်နေသောချစ်စရာကျွန်းဖြစ်သည်။ Mallorca သည်သင်၏ ဦး တည်ရာဖြစ်လျှင်ဤအံ့မခန်းနေရာများသို့သေချာသွားပါ။
Palma de Mallorca ။
Gran Canaria ၏မြို့တော် Las Palmas သည်ထွန်းလင်းတောက်ပသည် စပိန်တွင်လူ ဦး ရေအထူထပ်ဆုံးကိုးမြို့၎င်းကိုအသိအမှတ်ပြုသောဒေသခံ ၃၈၂,၀၀၀ ခန့်ရှိသည်။ အပျော်စီးသဘောင်္များနှင့်အခြားခရီးသွားများသည်အခွန်လွတ်“ စျေး ၀ ယ်” မှဆင်းသက်ရန်အလွန်နာမည်ကြီးသည်။ ကျွန်းသည်၎င်းတို့အကြားအာရုံထွေပြားသောနေရာများကိုပေးသည်။
Colon House ပြတိုက်
Roque Nublo ကျေးလက်ဥယျာဉ်
Bilbao ကိုရွေးချယ်တာဘယ်လိုလဲ။ လူ ဦး ရေ ၃၅၁,၀၀၀ ကျော်သည်၎င်းကို ရွေးချယ်၍ ၎င်းအားတည်ရှိသည် စပိန်တွင်ဒသမမြောက်လူ ဦး ရေအများဆုံးဒေသမရ။ ဤဥရောပဒေသကိုသရုပ်ဖော်သောရိုးရာနှင့်ဂန္ထဝင်များနှင့်အနာဂတ် futuristic ပုံစံဗိသုကာလက်ရာများကိုသိသာထင်ရှားစွာပေါင်းစပ်ခြင်းကသင်မြင်ချင်သောလတ်ဆတ်သောခံစားမှုကိုပေးသောစိမ်းလန်းသောသဘာဝရှုခင်းများကိုထည့်သွင်းခြင်းကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်။ ၎င်း၏အကောင်းဆုံးနေရာများမှာ
Gran Vía Don Diego López Haro
သေးငယ်။ တောက်ပပြီးခမ်းနားသည်။ နွေးထွေးသောမြို့ Alicante သည်ဤတွင်တည်ရှိသည်ကိုဤကဲ့သို့ဖော်ပြသည် စပိန်တွင်လူ ဦး ရေအများဆုံးနှင့်နံပါတ် ၁၁လူ ဦး ရေ ၃၃၄၀၀၀ ခန့်ရှိသည်။ တစ်နှစ်လျှင်ရက်ပေါင်း ၃၀၀ တောက်ပသောနေရောင်ခြည်ကြောင့်ဤနေရာသည်များစွာသောသူများ၏အလွန်နှစ်သက်မှုကိုရစေပြီးအခြားသူများကိုပစ်ပယ်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်လျှင်ဤအံ့မခန်းအထိမ်းအမှတ်များကိုသွားရန်သင့်အားငါဖိတ်ကြားသည်။
San Juan ၏ Bonfires
Cordoba မြို့အကြောင်းငါဘာပြောနိုင်လဲ။ ၌တည်ရှိသည် လူ ဦး ရေအများဆုံးနံပါတ် ၁၂ နေရာ ဥရောပနိုင်ငံ (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်လူ ဦး ရေ ၃၂၈၀၀၀) နှင့်၎င်း၏ကျက်သရေသည်ရောမအင်ပါယာအတွင်းတည်ဆောက်ခဲ့သောအဆောက်အ ဦး များ၊ ဗလီများနှင့်ထူးခြားဆန်းပြားသောငှက်များအကြားဖြန့်ဝေခဲ့သည်။ Cordoba သည်သင်၏ပန်းတိုင်ဖြစ်လျှင်သင်သွားကြည့်နိုင်သည်။
Santa Marina ဘုရားရှိခိုးကျောင်း
ခရစ်ယာန်archကရာဇ်၏ Alcazar ။
Alcázar Viejo ၏ Patios
Abderramán III ၏ Medina Azahara
သမိုင်းဝင် Valladolid မြို့၊ စပိန်နိုင်ငံတွင်လူ ဦး ရေအထူထပ်ဆုံးနံပါတ် ၁၃ ဖြစ်သည်မရ။ အဘယ်အရာကဤမျှထူးခြားစေသနည်း။ ၎င်း၏ခမ်းနားထည်ဝါသောခေတ်လယ်ဗိသုကာလက်ရာများနှင့်၎င်း၏ရှုထောင့်တိုင်း၌အသက်ရှုသွင်းသောနက်ရှိုင်းသောဘာသာရေးယိမ်းယိုင်မှု။ မင်းလမ်းတွေကိုဖြတ်လျှောက်ရင်မင်းကငါးရာစုမြင်းလှည်းတွေဆီကိုပြန်ပို့လိမ့်မယ်။ သမိုင်းနဲ့မျက်နှာစာဟောင်းတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့မြို့ကိုကြိုက်ရင် Valladolid နဲ့သူ့ရဲ့အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အအုံတွေကိုသွားကြည့်ဖို့မတွန့်ဆုတ်ပါနဲ့။
Santa María de la Antigua ဘုရားရှိခိုးကျောင်း
ဘုရားရှိခိုးကျောင်းနှင့် Diocesan ပြတိုက်
တက္ကသိုလ်နှင့် Santa Cruz
Campo de Grande
San Benito အဆောက်အအုံ
Galicia ဟုခေါ်သောအပိုင်းအစငယ်Vigo သည်လူ ဦး ရေအများဆုံးရှိသောဆယ့်လေးမြို့စပိန်ကိုကိုယ်စားပြုသည်သဘာဝဆွဲဆောင်မှုများနှင့်ပြည့်နှက်နေသောCíesကျွန်းစုများဖြင့်ဝန်းရံထားသည်။ ၎င်းသည်နေထိုင်ရန်သို့မဟုတ်တန်ဖိုးရှိသောလှပသောအသီးအရွက်များနှင့်ပင်လယ်ရေမြေရှုခင်းများဖြင့်ဝန်းရံထားသောအားလပ်ရက်ကိုကုန်ဆုံးစေသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အောက်ပါဆိုဒ်များသို့သင်သွားနိုင်သည်။
Guide of Our Lady of Mount ။
San Simónနှင့် San Antónကျွန်းများ
Porta Do Sol မှ
Gijónသည်စပိန်ရှိလူ ဦး ရေအများဆုံးမြို့ကြီး ၁၅ မြို့ကိုပိတ်လိုက်သည်မရ။ ဤကမ်းရိုးတန်းမြို့ငယ်လေးသည်မြောက်ဘက်တွင် Cantabrian Sea ဖြင့်ဝန်းရံထားပြီးလူ ဦး ရေ ၂၇၇၀၀၀ ကိုအဆက်မပြတ်ပင်လယ်လေတိုက်ခတ်စေသည်။ ဤအပြင်ခရီးသွားဧည့်သည်ဖြစ်စေ၊ နေထိုင်သူဖြစ်စေသင်မလွတ်နိုင်သောခရီးသွားဆွဲဆောင်မှုများစွာရှိသည်။
San Pedro Apóstolဘုရားကျောင်း
Gijón Main Square
Isabel la Católicaပန်းခြံ
Campo Valdés၏ Roman Baths
San Lorenzo ကမ်းခြေ
Cerro de Santa Catalina ပန်းခြံ
ဒီလှပတဲ့မြို့တွေကိုမင်းဘယ်လိုထင်လဲ။ မင်းဘယ်သွားမလို့ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီလဲ။ တစ် ဦး စီသည်တူညီသောဝိသေသလက္ခဏာများ၊ ဘာသာရေးထိတွေ့မှု၊ သဘာဝအလှအပများ၊ သမိုင်းရာစုနှစ်များနှင့်ရှေးခေတ်ဗိသုကာလက်ရာများနှင့်အတူဆွဲဆောင်မှုရှိသောမြို့ပြဒီဇိုင်းများကိုထွန်းလင်းပြသသည်။ စပိန်နိုင်ငံ၊ နေထိုင်ရန်စံပြပရဒိသုတစ်ခုဖြစ်သည်.
စတင်ပြုလုပ်ခြင်း » ယဉျကြေးမှု » စပိန်မှာလူ ဦး ရေအများဆုံးမြို့ ၁၅ မြို့